Somtel - Wikipedia
Songbadh BD Somtel
Calaamadda ka muuqata sawirkan waxaa weeye caalamada u gaarka ah ee shirkadda isgaadhsiinta ee Somtel ee kalaarka huruuda ah
Hargeysa Muqdisho Boosaaso Garoowe, Somalia
Axmed Nuux Siciid Ducaale
GSM Fixline 4G LTE Mobile Money Roaming Voip
inka badan 6000 Aduunka oo dhan
Somtel (Af-Ingiriis: Somtel Af-Carabi: سومتيل), waa shirkad isgaarsiin oo ku taala Soomaaliya.Waxa ay ka mid tahay shirkadaha ka farcamay Dahabshiil. Shirkadaan waxa ay cagaheeda isku taagtey bishii Maarso 1998.
1 Adeegyadda Somtel
3 Shirkado Shiraako la ah
5 Linkiyo banaanka ag
Shirkadda somtel waa shirkad isticmaasho adeega xadhigla (wireless) ee casriga ah. Shirkadaan waa shirkadii ugu horeeysay ee Soomaaliya ka bilaawdo adeegyada 3G iyo 4G LTE. Shirkadani waxa xaruunteeda ugu ween ku taala wadada madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa, Sidoo kale waxaa shirkadan si rasmi ah uga hawl gashaa dhammaan wadanka oo dhan iyadoo xaruumo ku leh dhammaan gobolada dalka oo dhan.
Ereyga Somtel waxaa laga soo xigtay ereyada Afka Qalaad ku noqonaya "Somali Telecomunication"; taasi oo macnaheedu yahay "Isgaadhsiinta Soomaalida".
Shirkado Shiraako la ah
Bishii Nofember 2013, shirkada warisgaadhsiita O3b Networks, Ltd. waxay ku dhawaaqdey ineey Somtel wada galeen heshiis ah in O3b keeni doonto adeeg internet oo xawaarihiisu aad u sareeyo, isla markaana kharash badan ugu fadhiyin Somtel.
Tan ilaa horaantii 2012, Somtel waxay heshiis la gashay shirkada Google si ay u isticmaasho adeega e-mailka ee shirkadani. 
Shirkada Somtel waxay ku shaqeeysa adeegyada kala ah GSM iyo 4G LTE, kuwaasi oo leh awood ka fiican kuwii hore. Intaas waxaa dheer adeegyo kale oo kala ah: 3G 2100, 2G 1800, 900 iyo LTE 800MHz 20 FDD.
Linkiyo banaanka ag
↑ , " Somtel waxay ka mid tahay shirkadaha ka farcama Dahabshiil"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Somtel&oldid=187040"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:05, 7 Diseembar 2018.